CAAGRSHOEGA B / HEPATITIS B WAX BADAN KA OGOOW – Dhakhtar Amiin
CAAGRSHOEGA B / HEPATITIS B
Cagaarshowga waa Noocyo badan yahay waxaa ugu caansan 3 qaybood oo kala ah cagaarshow A, cagaarshoe B iyo cagaarshow C
Oo aad ukala duwan,
Balse Hadda waxa aynu ka hadleynaa mid kamid ah oo ah Cagaarshow B kuwa kalana waan ku xijin doonaa haduu alle yiraahdo
CAGAARSHOW B Waa caabuq khatar ah oo ku dhaca beerka waxaana sababa Hapititis B virus (HBV)
Dadka uu ku dhaco xunuunkan qayb kamid ah waa uu ku daba dheeraada isaga oo ugu danbeen sababa Kansarka ku dhaca beerka ama Cirrhosis oo ah xaalad ku sababta in beerka uu qalfoof noqdo sidaasna uu shaqo gab ku noqdo.
Inta badan dadka uu ku dhaco cagaarshowga B si iskiis ah ayey uga caafimaadaan iyagoon wax daawo ah aan qaadan,
Lkn ilmaha yar-yar iyo caruurta waa u ku daba dheeraadaa,
Sidoo kale cagaarshowgan B ah ma jirto daawo rasmi ah oo hadaad cunto aad 100% ku caafimadayso, marka laga yimaado daawooyin kaalmaati ah oo lagula tacaalayo fayriska,
Lkn waxa uu leeyahay ka hortag aad u qaadan karto talaal ahaan,
Waana midda qof walba lagula taliyo in uu qaato talaaalkan maadaama hadii uu ku dhaco qofku uusan wax daawo ah lahayn.
Calaamadaha cagaarshow B waxa ay qofka kasoo muuqda 3 bil kadib marka uu kugu dhacay fayrisku waxaana kamid ah
‘Kaadida oo madoobaato
-Tabar darro iyo Daal
-Matag iyo Lalabo
-Maqaarka oo jaalle noqda
-Kala goysyada iyo murqo xanuun
-Indhaha oo cadaad cagaar u dhaw ah.
Inbadan oo caruurta kamid ah makasoo muuqdaan calaamadaha hadii uu ku dhaco fayrisku ilaa uu xaalad halis ah galo si lamid ah dadka waaweyn.
Hadii aad isku aragto calaamadahan qayb kamid ah ama aad qof qaba aad galmo la sameyso fadlan si deg-deg oo 24 saac gudohood waa in uu ula xiriirtaa dhakhtar si uu kuu siiyo talaalka xanuunkan, uuna uga hortago fayrisku in ku fido jirkaada.
SIDA LA ISKUGU GUDBIYO XANUUNKAN.
-Galmada: in aad u tagto qof qaba fayriskan dabadeed ay isgaaraan dhiigiisa iyo dhiogaada calyadiisa iyo shahwaadkiina ama dheecanada shahwada ka horeeya.
-in lagugu duri silinge qof qaba xanuunkan lagu soo durey. ama si shil ah qof shaqaale caafimaad ah in uu isagu iskugu mudo cirbad uu ku durey qof qabey fayriska.
-Hooyada uurka leh ee qabta fayriskan waxa ay u gudbin kartaa cunugeeda ay dhali doonto xiliga foosha hadii uusan dhakhtari la tacaalin og xaalada jirta.
YAA KHATAR UGU JIRA IN UU KUDHACO XANUUNKAN.
dadka galmada lasameeya dadyowga farada badan ee aan ku koobneen xaaskiisa ama ninkeeda kaliya.
-Nin u tagey nin kale (khaniisyada)
-Dadka isla wadaaga shukumaanada Cadeyadda lagu cadeysto.
in aad u safarto meelaha uu ku badanyahay sida Africa, bariga dhexe iyo koonbarri ee aasiya.
MUXUU SABABAA HADII UU DABO DHEERAADO.
-beerka oo howlgab noqdo
-kilyaha oo howlgab noqda
-cirrhosis-berka oo kholof noqda
Intaan mid kamid ah hadii uu keeno ugu danbwen qofku waa u dhintaa.
DAAWADIISU MAXAY TAHAY?
Horey sida aan idinkugu so sheegey xanuunkan malahan daawo rasmi ah lkn si iskiis ah ayuu dadka qayb uga bogsoodaan ama wuu ku dabo dheeraadaa.
Qofka uu ku daba dheeraado dhakhaatiirtu labo siyaabood ayey ula tacaalaa.
1= in ay siiyaan daawooyin loo yaqaan ANTIVIRAL kuwaas oo la tacaalaya fayriska in uusan dhaawac u geysan beerka.
2= in laguu sameeyo wax loo yaqaano
LIVER TRANSPLANT oo ah in beer qof kale laguu galiyo lagaana saaro beerkaadii xanuunsanaa.
HADABA MAXAA TALLO AH OO AAD UBAAHANTAHAY HADAAD QABTO XANUUNKAN.
Hadii aad isku ogaato xanunka isku dey in aad xakameyso in uu qof kale kaaga gudbo.
Dhowrkaan siyaaboodna samee si aad u xadido faafitaankiisa.
1= hadii aad xaas tahay ama adigu aad xaasle nin ah tahay aadna qabto cagaarshowga fadlan xaaskaada ama ninkaada usheeg in aad qabto cagaarshow kuno boori si aadan ugu ridin xanuunka in uu qaato Talaalka cagaarshowgan B .
Ilaa inta uu ka qaadanayana talaalkaas aadan galmo ama waxyaale kale aadan la sameen.
2= gabar walba ama wiil walboow ka hor inta iinan is guuraan baaritaan isku sameeya cagaarshowgan ah hadii midkiin laga helo ma ahan wax khatar kan kale ha istalaalo kan qabana daawada ha qaato.
Ma ahan ceeb dunida dadka inta aysan is guursan in ay isbaaraan waa waajib.
3=hadii aad leedahay cagaarshow fadlan haku deeqin dhiigaada ama xubnahaaga mid kamid ah sababto ah waxa fidaya fayriska.
4=hala wadaagin qofna ama hala isticmaalin qof hal sakiin ama hal maqas ama hal cadey/Rumey sababtoo way fidin karaan fayriska.
5=Hadii aad Uur leedahay aadna qabto Fayriskan u sheeg dhakhtarka si uu u badbaadiyo ilamahaagu uusan uga dhicin fayriska talaalna uu usiiyo marka uu dhasho.
Qof kasta waxaan kula talin lahaa in uu qaato talaalkan Cagaarshowgan B
Muqdisha waa laga helaa isago oo qiimo jaban ah qiyaas ahaan waxan ku ogaa 10 dollar.
U #SHARE gareeya walaalihiin ama halkaan uga wac qof asxaabtaada oo muhiim kuu ah si uu iskaga ilaaliyo xanuunkan.
Previous WAX WALBA OO AAD UGA BAAHANTAHAY IN AAD KA OGOOTO BEER SUBAGGA/DHIIG SUBAGGA AMA KOLESTEROOL (CHOLESTEROL)
Next DHIBAATADA DARAN EE AY SHIISHADU KEENTO